समयको माग भन्दै शरीर देखाउँदै...? (भिडियोसहित) | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
समयको माग भन्दै शरीर देखाउँदै...? (भिडियोसहित)
२०७४ पौष १७, सोमबार ०९:५८ pm | आजको पत्रिका
काठमाडौँ, १७ पुस । छोटा लुगा लगाउने, शरीर देखाउने, अंग प्रदर्शन गर्ने चलन अचेल बढ्दो छ । यसले सामाजिक विकृति बढ्छ भन्दै विरोध पनि हुँदै आएको छ । छोटा लुगा लगाएकै कारण समाजमा विकृति बढेको बताउनेको संख्या पनि ठूलो छ । तर समयले ल्याएको फेसन वा चलन भनेर कतिपयले यो सामान्य विषय भएको र त्यति धेरै हल्ला गर्नु पर्ने अवस्था पनि नभएको कतिपयको बुझाइ छ ।
युवतीहरुले पनि समयको माग, फेसन वा मोर्डन बन्ने भन्दै छोटा लुगा लगाउने गरेका छन् । समाजमा पच्ने, आफूलाई सुहाउने लुगा लगाउनु पर्ने कतिपय युवतीहरुकै सुझाव छ । तर कतिपयले भने निक्कै अपाच्य किसिमका लुगा लगाएर हिड्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
यस्तै भाव बोकेको गीत गायक उत्तम विक्रम विष्टले जनवरी १ तारिखकै दिन सार्वजनिक गरेका छन् । 'स्कर्ट पाइन्ट...' बोलको रमाइलो गीत सार्वजनिक भएको हो । युविवि को शब्द र गायक स्वयमको संगीतमा तयार भएको यो गीतको स्वरमा बेनिका प्रधानले साथ दिएकी छिन् ।
गीतको म्यूजिक भिडियोलाई शिव विकले निर्देशन गरेका छन् । मोडलको रुपमा शिव विक र जिना थापा रहेका छन् । शम्भू चालिसेले खिचेका भिडियोका दृश्यलाई विवेक विकले सम्पादन गरेका हुन् ।
समय अनुसारको गीत भएकोले दर्शक स्रोताहरुले मन पराउने अपेक्षा गायक विष्टले गरेका छन् ।
यो गीतको भिडियो हेर्नुहोस्ः